AVAST: bvunzurudzo yakasarudzika yeLxA | Linux Vakapindwa muropa
AVAST Software ikambani inozivikanwa mune yekuchengetedza, sezvo iri basa kune imwe yeanonyanya kuzivikanwa antivirus, ine musika wakakura mugove maererano nerudzi urwu rwechigadzirwa. Uye zvakare, zvakare munyika yeakavhurika sosi inozivikanwa kune mamwe ayo mapurojekiti uye kuzvipira neiyi nzira yekunzwisisa software. Muenzaniso weiyi GitHub repository iyo ine ...
Iyo kambani yakavambwa mu1990 uye kubvira ipapo dzakawanda nhau uye zviitiko zvakatora. Pakati penhengo dzayo, iri muSpain Luis Corrons, inova ndiyo yanga iine moyo munyoro kupindura bvunzo yedu chete kune vese vaverengi veLxA. Iye anoita basa reAVAST Security Evangelist, sekuziva kwako "maevhangeri" aripo chaizvo muchikamu chehunyanzvi chebasa ravanoita. Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma pamusoro pemaonero emakambani eAVAST naLuis, ramba uchiverenga ...
Louis Corrons: Isu tinogara tichikurudzira kuti vashandisi vaise mhinduro yekuchengetedza pazvinhu zvese zvinogoneka, uye mune kesi yemabhizinesi Linux maseva, anofanirwa kugara achidzivirirwa. Mamwe masisitimu anogona kuratidzika seakachengeteka kupfuura mamwe, asi kune zvakawanda zvinotyisidzira zvepachikuva, zvakadai sehunyengeri, izvo zvinogona kukanganisa vashandisi pane chero hurongwa, kana kunyengedza vashandisi kuti vawane ruzivo rwakashata, senge online matsamba ekubhengi. Panyaya yeLinux, kuchengetedzwa pamaseva akagovaniswa, senge email, SMB, FTP, uye HTTP, kwakakosha.
LC: Mamwe masisitimu anoshanda haana kunyanya kuchengetedzwa kupfuura maPC, chete nekuti kune vashoma vasiri maWindows vashandisi pane vashandisi veWindows pasi. Izvi zvinoita kuti vashandisi vasiri maWindows vasanyanya kudikanwa sezvinangwa, nekuti dziva rinotarisirwa idiki.
LC: Vashandisi veIOS vane njodzi diki yekutapukirwa nemaapplication avanotora, havasi kudhawunirodha maapplication kunze kweiyo yeApple App Store, uye iwo maapuro anoenda kuburikidza nekutarisisa kwekuchengetedza. Nekudaro, zvemagariro mainjiniya, zano rakakurumbira rinoshandiswa nevapambi vemakomputa avo vanoda kunyengedza vanhu kuti vape ruzivo rwemunhu kana kurodha pasi malware kuti vatapukire nekuita sechinhu chinobatsira kana chisina mhosva, inogona kukanganisa vashandisi pamapuratifomu ese.
LC: AVAST inopa Wi-Fi Inspector mune yemahara uye yakabhadharwa vhezheni, ichibvumira vashandisi kuita epamba network chengetedzo yekutyisidzira scanners. Basa racho rinozivisa mushandisi kana vakashandisa rakashomeka kana rakasarudzika password, kana kana chimwe chezviridzwa zvakabatana neinternet network zvine njodzi. AVAST inopa vashandisi matipi ekugadzirisa dambudziko, iro rinogona kusanganisira, semuenzaniso, marongero ekusimbisa password, kana kugadzirisa kune iyo firmware yezvigadzirwa.
Muhafu yekutanga ye2019, AVAST ichavhurawo itsva IoT chengetedzo chikuva, Smart Hupenyu, iyo yakavakirwa paAI tekinoroji yekuona uye kuvhara kutyisidzira uye inoendeswa kuburikidza neSawaS (Software-se-a-Service) modhi kune yekufona sevhisi vanopa uye vatengi. Imwe yekutanga yedu Smart Hupenyu-hwakavakirwa kupa ndeye AVAST Smart Kudzivirirwa Kwemusha, iyo inogona kupa vatengi dziviriro uye kuoneka mune zviri kuitika pamata network avo. Makiyi akakosha anosanganisira kuona kwekutyisidzirwa kwepachivande, mabhodneti, malware pamwe nekuchengetedza browser uye kudzivirira kweDdoS (Distributed Denial of Service) kurwisa. Mhinduro yacho yakavakirwa pane yedu tsika AI tekinoroji, uye inogara ichidzidza maitiro uye mashandisiro maitiro. Nekuda kweizvozvo, zvinoita kuti zvikwanisike kuona hacks kuburikidza neasingaenderane mumigwagwa nechero mudziyo weIoT.
LC: Makambani eAntivirus akaita seAVAST anogona kupa maturusi akaita seAVAST Antitrack, iyo inodzivirira mabhurawuza evatambi kubva mukugadzira chimiro chemushandisi. Kupfuura izvi, AVAST inovavarira kudzidzisa vashandisi nezve njodzi dzekuvanzika, kuburikidza nemikana yedu kana vezvenhau, senge Facebook, Twitter, blog, kwatinogara tichitsikisa zvinyorwa zvedzidzo, pamwe nezvakatumirwa pazvinhu zvekupedzisira kutyisidzira.
LxW: Ndezvipi zvimwe zvakasara kana matambudziko awakatarisana nawo nguva pfupi yadarika maererano nechengetedzo?
LC: Zvinotyisidzira zvinotarisana nevashandisi vePC uye nharembozha zvakawandisa, asi zvinonyanya kusanganisira cryptojacking ,hlengoware, spyware, uye Trojans yekubhanga Pane zvese nharembozha uye PC, mapurogiramu mazhinji akashata anoiswa nevashandisi vanonyengedzwa nemagariro enjiniya. Zvemagariro mainjiniya zano rinoshandiswa kunyengedza vanhu kuti vatore zvimwe zviito. MaCybercriminals vanoshandisa social engineering kutora mukana wehunhu hwevanhu, sezvo zviri nyore kunyengedza munhu pane kubira system, kugadzira antivirus, ingave yemahara kana yakabhadharwa, yakakosha zvakanyanya. MunaAugust, AVAST yakadzivirira 34,3 miriyoni yekurwiswa kubva mukutapukisa vashandisi vePC muArgentina uye 2,2 miriyoni kubva mukutapukisa vashandisi venhare.
Cryptojacking ndipo apo matsotsi e-cyber anoshandisa makomputa evanhu kuchera mari yemadhora pasina mvumo. MaCybercriminals anogona kuisa software pakombuta yemunhu akuvara kuti achekese kana kushandisa browser-based cryptographic malware, inoitwa mukodhi yewebhusaiti kuburikidza nezvinyorwa zvemigodhi. Kana mushandisi akashanyira webhusaiti, iyo script inotanga kuchera macryptocurrencies uchishandisa simba remushanyi wemushanyi. Cryptojacking inogadzira akakwira simba mabhajeti kune akabatwa, mashandisiro edhizaini mashandiro, uye kurasikirwa negadziriro, uye ine huwandu hwakaipa hwakaipa pahupenyu hwemidziyo. Sezvo izvi zvichimhanyisa browser-based, chero mhando yechigadzirwa inomhanya browser inogona kutapukirwa.
Rudzikunuro imarware inotadzisa kupinda kune chishandiso system kana mafaera uye inoda rudzikunuro rwekuti chibvumirano chibviswe. Rudzikunuro runotadzisa kupinda kune iyo sisitimu yese kana kune mamwe mafaera nekuvanyorera. Iwo mameseji erudzikuro dzimwe nguva anoita kunge anouya kubva kune yepamutemo hurumende agency iyo inopomera vanyajambwa kuita hutsotsi hwepamhepo, zvichityisidzira vazhinji kubhadhara muripo. Iyo inowanzodikanwa rudzikunuro inongobhadharwa chete mumari yemadhora, saka mubhadharo haugone kutsvagiswa nyore nyore kune cybercriminal kuseri kwehlengwareware.
Njodzi inotyisa mbozhanhare iri kuramba ichiwedzera ndeye Trojans dzemabhengi. Banking Trojans zvikumbiro zvinoedza kubiridzira mushandisi kuti ape maakaundi avo ebhangi nekunyepedzera kuita zviri pamutemo kubhengi kunyorera, kazhinji nekuteedzera iyo yekunyoresa skrini kana nekupa generic login screen ine iyo bank r logo. Inoenderana bhangi. AVAST nguva pfupi yadarika yakaita ongororo, ichikumbira vatengi kuti vaenzanise chokwadi chepamutemo uye chekunyepedzera kubhengi kunyorera. MuSpain, 67% yakacherekedza chaiyo mobile banking mafekitori senge emanyepo uye 27% vakatora manyepo ekunyepedzera emabhengi emahara ezvechokwadi zvinhu. Mhedzisiro iyi inotyisa uye inoratidza kuti vatengi vanogona kupunzika nyore nyore kubhangi reTrojans.
LC: Mune zvimwe zviitiko, kungoshandisa antivirus kunogona kubatsira kuzivisa malware. Semuenzaniso, nhasi, AVAST inodzivirira vanopfuura mamirioni mazana mana vashandisi pamhepo. Vashandisi vemahara vanotipa mukana wekuti uwane huwandu hwakawanda hwekuchengetedzwa kwedata, inova kiyi yekubudirira kwehungwaru hwedu hwekugadzira uye tekinoroji yekudzidza kwemuchina. Yedu yepasi rese mushandisi base inopa simba redu rekuchengetedza injini, iyo yakavakirwa paAI uye muchina kudzidza, ichitipa isu zvisati zvamboitika muhupenyu hwehupenyu hwe cyberattacks, zvichitibatsira kuti tigare kumberi nekudzivirira. Kune vashandisi vedu. Pamusoro pezvo, vashandisi veAVAST vanogona kuendesa mafaera uye zvinongedzo kune anofungidzira mawebhusaiti akananga kuAVAST Thread Labs pano: https://www.avast.com/en-us/report-malicious-file.php
LC: (havana kupindura)
LC: Panguva ino, AVAST haina kupa Linux antivirus mhinduro kune vashandisi vekumba.
LC: Linux chengetedzo inofanira kuona ese marudzi e malware, kusanganisira iwo akagadzirirwa Windows, Mac, Linux, uye muchinjika-chikuva.
LC: Mune ramangwana, antivirus yeIoT zvishandiso ichauya mune imwe fomati. Huremu hweIoT zvishandiso uye smart dzimba masisitimu akakurisa uye akasiyana kuti agadzire magumo-poindi dziviriro kune vese. Fungidzira kuti iwe unofanirwa kuisa yekuchengetedza mhinduro pane ako ese akangwara zvishandiso.
Mhinduro yekuchengetedza dzimba dzakangwara ndeyekupa network-chikamu chengetedzo. Iyo router ndiyo iri pakati penzvimbo yekuchengetera imba, uko kwese zvishandiso zvinobatana, uye ndipo panofanirwa kuchengetedzwa. Nekuti izvo zvishandiso netraffic yavanotumira zvakasiyana kwazvo, tinoda huchenjeri hwekugadzira kuti tione uye tivhare kutyisidzira. Zvigadzirwa zveIoT nezviitwa zvavo uye kuyerera kwedata zvinofungidzirwa kupfuura zvePC kana zvinofamba, saka zvinonyanya kuitika kudzidzisa michina yekudzidza algorithms kuti uone kutyisidzira. Shure kwechero PC, tinogona kutarisira munhu ane hunhu maitiro angaite seasina kusarudzika: mushandisi anogona kusevha paInternet kwechinguva, uye obva angotanga kushamwaridzana neboka remasaiti kana kutumira mazana emaimeri. Zvisinei, kana firiji ikatanga kutumira maemail, tisingatauri mazana ezviuru awo, mhinduro dzekuchengetedza dzinogona kuona kuti ichi chiratidzo chakajeka chekuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka. Uye izvi zvinoita kuti zvive nyore pamhinduro dzekuchengetedza kumisikidza hwaro hwekutanga uye nekuona kusazvibata kwehunhu zvichienzaniswa neiyo yekutanga.
KuAvast, isu takagadzira nyowani IoT yekuchengetedza chikuva, Smart Hupenyu, iyo yakavakirwa paAI tekinoroji yekuona uye kuvharidzira kutyisidzira uye kununurwa kuburikidza neSoftware seSevhisi (SaaS) modhi yevaterevhizheni vanopa sevhisi nevatengi. Imwe yezvipo zvedu zvekutanga zvinoenderana neSmart Life chikuva ndiAvast Smart Home Security, iyo ichapa vatengi dziviriro uye kuoneka mune zviri kuitika padandemutande repamba. Makiyi akakosha anosanganisira kuona kwekutyisidzirwa kwepachivande, mabhodneti, uye malware, pamwe nekuvhura kwakachengeteka uye kudzivirira kweKugovera Kuramba Kwebasa (DDoS) kurwisa. Mhinduro yacho yakavakirwa pane yedu bespoke yekuchenjera tekinoroji tekinoroji, kugara uchidzidza chaiwo maitiro uye mashandisiro maitiro. Nekuda kweizvozvo, iyo inokwanisa kuona hacks kuburikidza neasina kunaka mune traffic nechero mudziyo weIoT sezvazvinoitika uye zvinogona kuita. Nekuda kweizvozvo, semuenzaniso, kana smart thermostat ikatendeuka pane imwe nguva isina kujairika uye ichitumira data nevhoriyamu yakakwira kuenda kunzvimbo isingazivikanwe, tinogona kuita ipapo ipapo kumisa kurwisa uye kunyevera mhuri kuchiitiko chisingazivikanwe. Uye sezvo nzvimbo yeIoT yakashanduka, takawana nzwisiso uye nekudaro kugona kuri nani kwekuidzivirira. Mushure mezvose, pane ramangwana rakajeka kumberi: uko zvishandiso zveIoT zvinogona kunyatso kutinyaradza kupfuura dambudziko.
Uye neiyi bvunzurudzo inopera nhevedzano yedu yehurukuro ne antivirus makambani, inozove nechinyorwa chinoongorora zvatakadzidza nekufamba kwenguva nezvekuti kana tichifanira kuisa antivirus muLinux uye izvo zvavakatiudza mune idzi kubvunzurudzwa ... Ne data randakawana kubva kubvunzurudzo iyi uye izvo zve ESETPamwe pamwe nemamwe maonero andakakwanisa kuziva kubva kuGoogle mainjiniya ekuchengetedza kana rimwe zano kubva kuna Chema Alonso pachake iro randakakwanisa kuverenga, chinyorwa chinogona kubuda chinonakidza uye pamwe chisingatarisirwe kune vazhinji. Sezvandinogara ndichitaura, kwete zvese zvavanotiudza zvinogara zviri zvechokwadi uye unofanirwa kudzidza kusefa uye uzive izvo zvatinogona kutora sechokwadi. Ini zvechokwadi ndinofunga kuti kune zvakawanda zvekusaziva pakati pevashandisi nezve nyaya dzekuchengetedza dzandinotarisira kudzinga munguva pfupi, zvirinani kune veGNU / Linux vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » AVAST: hurukuro yega yeLxA
Antivirus inogona kuve yakanyanya hutachiona uye nezvimwe, kana isina kusununguka uye iwe usingazive zvazvinoita. Shuwiro yakanakisa.
Vanoda kuziva chaizvo kuti pavanomubvunza nezve nzvimbo yekuchengetedza mumashandisirwo edesktop, vanoreva "imo nekuti Windows ndiyo nzvimbo yezvinhu zvese" ndomaitiro avakaita kuti azvione uye pavanomubvunza mubvunzo iwoyo asi vakatarisa pane nhare mafoni, ivo vanouya nechimwe chinhu icho chinogona nyore kuiswa kune desktop desktop masisitimu, saka chii fart? Kubva kuGNU / Linux nevamwe, tora zvinhu zvako kubva kumahofisi epamutemo usingabate zvinhu zvechitatu-bato.
Pfungwa dzakakodzera kuongorora; Zvido.